Indlela yokuphumelela ku-Amazon egijima ukufuna usesho lwamagama angukhiye ngaphezulu?
Ngeshwa, akekho umhlahlandlela ocacile noma yiziphi izinyathelo zesezinyathelo ngezinyathelo ezingaqinisekisa ukuthi uhlu lwakho lwemikhiqizo luzobonakala kahle ekusesheni kwe-Amazon okunikezwayo okudayiswa phezulu. With izigidi abathengi abakhuthele, izinkulungwane eziningi imikhiqizo umkhiqizo, futhi eyinkimbinkimbi yokusesha simo algorithm Amazon iyindawo ukuncintisana kakhulu ukuthengisa. Futhi nakhu lapho ukulungiswa kokufakwa komkhiqizo wakho kudlalwa khona. Ngisho ukuthi ngohlu oluhle lwamagama angukhiye aphezulu angakwazi ukugibela kalula phezulu ekusesheni kwe-Amazon ukuthola okunikezwayo okuthengisayo. Kodwa ungayithola kanjani amagama angukhiye angcono kakhulu emininingwaneni yokusesha kakhulu kodwa namanje ukuncintisana okuphansi? Ngezansi ngizokukhombisa imfundo emfushane yokwenza izinto zibe lula, okungenani lezo ezihlobene nophenyo lwamagama angukhiye e-Amazon - denis guideone minimalist watch strap.
Thola Amagama Angukhiye
Uma ungazi ukuthi yiziphi izinkinobho eziyinhloko ezizosetshenziswa ukuze usebenzise uhlu lwakho lwemikhiqizo e-Amazon, nansi iphuzu lakho lokuqala. Into yokuqala okumelwe yenziwe ukuthola amagama angukhiye. Ngisho ukuthi uma usuvele unomkhiqizo wokudayiswa, sekuyisikhathi sokuthola izinombolo zokusesha eziyisisekelo, ngokuhambisana nokuthola isithombe esikhulu semishwana yokusesha ende ende esetshenziselwa abathengi bukhoma. Ngincoma ukusebenzisa i-Google Name Keyner Planner njengesisombululo sakho esihle sokukhahlela ukuqonda ngokushesha imithetho yemdlalo ofuna ukuyinqoba nge-Amazon search for offers top seller.
Bamba ndawonye Igama elingukhiye Imiklamo
Isinyathelo sakho esilandelayo ukudonsa ndawonye imibono eyinhloko yamagama avela emithonjeni emibili eyinhloko - izintandokazi zokusesha zangempela, kanye namagama angukhiye aphezulu asebenzayo kanye nemisindo ende ende esetshenziswa ngempumelelo abancintisana nabo. Nanka lapho amathuluzi okucwaninga ngegama le-Amazon kanye namathuluzi wokulandelela aqala ukudlala! Ngenhlanhla, kunezinketho eziningi ezahlukene (okungukuthi, amathuluzi akhethekile, amapulatifomu e-intanethi, noma izandiso zesiphequluli) etholakalayo kwiWebhu. Kepha mina, ngingahle ngincoma ukuqhuba ucwaningo lokuncintisana, kuhambisane nokuhlaziywa okujulile kokuthandwa kwangempela kwe-shopper usebenzisa elinye lamathuluzi alandelayo aklanyelwe ukuhlola ukusesha kwe-Amazon kumathuba angamagama angamagama angokhiye wokuthengisa: I-KeywordInspector, i-Scope, i-JungleScout, noma ama-AMZ aphelele I-toolkit ye-Tracker.
Hlaziya iMetric Key - futhi Wenzelwe
Akumangazi ukuthi uzokwenza indlela yakho ngokusebenzisa izinkulungwane zemibono ehlukile yegama elingukhiye elibonakala okungenzeka ukunqobe. Kodwa indlela yokutshela iziphakamiso ezifanele ngempela ezivela kwezinye izinto ezingacabangi kangako? Nakhu amamethrikhi ayisihluthulelo ukuze uphendule uhlu lwakho oluyinhloko lwamagama angukhiye angukhiye kwisethi esifushane yezenzo eziwusizo:
Umqulu Wokusesha - ukubeka kalula, i-keyword yokusesha ivolumu ibonisa ukuthi ithandwa kanjani liphelele emhlabeni jikelele. Ngisho ukuthi ngaphandle kwezimakethe ze-Amazon ngokwayo, ivolumu yosesho jikelele lisinikeza ukuqonda okubanzi kokuthandwa kwegama elingukhiye ekusesheni kwe-Google phakathi kwabathengi bukhoma.
ukuchofozwa - kuzokusiza ukuthi uqonde amandla okukhiqiza ithrekhi yangempela yegama elingukhiye elilodwa. Noma ngokuphambene nalokho, ukwazi ukuchofoza-ngezinga noma ithrafikhi yomncintiswano wakho we-niche noma isigaba sakho esiseduze, ungakwazi kalula ukubamba amagama angukhiye abalulekile asevele abonisa imiphumela ephezulu e-Amazon.
Igama elingukhiye (Complexity Complexity) - cabanga ngobude futhi usebe ubunzima begama elilodwa elingukhiye noma ibinzana elide ngaphambi kokusebenzisa ukuhlelwa kokufakwa komkhiqizo wakho ngamunye. Ngisho ukuthi into eyinselele kakhulu lapha ukuthola ibhalansi yegama elingukhiye eliphakathi kokubaluleka kwezohwebo nokubeka ubunzima. Futhi khumbula, uhlose ukuthola lawo magama angukhiye angase asetshenziswe ngabantu bangempela, hhayi izinjini.